MODA | Article Detail | Single ဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ်သွားရမယ့်သူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ ( ၆ ) မျိုး
Single ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြီး သွားချင်ရာသွား ၊ နေချင်သလိုနေ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှလည်းကြည့်စရာမလိုသလို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမုန့်ဝေကျွေးစရာမလိုတဲ့အတွက် တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀နေထိုင်မှုတစ်ခုပါ။ ခုပထမစာကြောင်းကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲကကြိတ်ထောက်ခံနေရင်တော့ အောက်ကအချက်တွေဆက်ဖတ်ဖို့မလိုပဲနဲ့တောင် သင်က ထာ၀ရFA လောင်းကြီးဆိုတာ ရဲရဲအာမခံလိုက်ပါတယ်။ လူအများစုက ဘယ်လောက်ပဲ Single is the best လို့အော်နေပါစေ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ကြိတ်ပြီးလိုချင်နေကြသလို တချို့ကလည်း အရွေးလွန်တာရော၊ အပူမရှာချင်တာရောကြောင့် အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးဘ၀ကို သေသေချာချာကြီးရွေးချယ်ထားပြီးသားဖြစ်‌နေကြသူတွေပါ။ အဲဒီလို တစ်သက်စာ Single ဇာတာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ခုဖော်ပြထားတဲ့ ထူးထူးခြားခြားစရိုက်လက္ခဏာလေးတချို့ကို ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အများကြီးမျှော်မှန်းထားတတ်ကြသလို စိတ်ကူးယဥ်အိပ်မက်ထဲကမင်းသားလေးနဲ့လည်းဆုံတွေ့ချင်ကြတာမိန်းကလေးအများစုရဲ့ သဘာ၀ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို စိတ်ကူးထဲကချစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းထပ်တူကျတဲ့သူမျိုးတွေ့မှ ချစ်သူထားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်သက်လုံး ပျော်ပျော်ကြီး Single ဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။ ဘ၀က ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးလေနော်။
အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးဇာတာပါသူတွေမှာ အတွေ့များရတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ကတော့ ဇီဇာကြောင်တာပါပဲ။ တစ်ခုခုဆို သူများထက်ပိုပြီး စေ့စပ်တွက်ချက်လွန်းသလို ၊ ချေး(ဂျီး)များလိုက်တာလည်း နှစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူစားမျိုးတွေပါ။
3. ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှမဝေမျှချင်ဘူး
ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးကိုမှ တခြားသူတစ်ယောက်ကို ဝေမျှလိုစိတ်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန် ၊ကိုယ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု ၊၀မ်းနည်းမှု ၊ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်၀တ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ နောက်ဆုံး ကိုယ့်အိပ်ရာလေးကိုတောင်မှ တခြားသူတစ်ယောက်ကို ဝေမျှရမှာ အရမ်းတွန့်တိုတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကမ္ဘာလေးထဲမှာ ကိုယ်သာရှိနေသင့်တယ်ဆိုတဲ့တစ်သိပုဂ္ဂလအတွေးအခေါ်ဆန်လွန်းသူတွေပါ။
အပြင်မှာတစ်ခါလောက်ချိန်းတွေ့ဖူးတာနဲ့ သူကတော့ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုး၀င်တတ်တယ်။ တစ်ဘက်ကကိုယ့်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိ တစ်ယောက်တည်းစိတ်ကူးတွေယဉ်ပြီး ပြီး‌ရင် နောက်တစ်လလောက်ထိ အသည်းတွေထိုင်ကွဲနေမယ့်သူမျိုးပါ။
5. Exကို မမေ့နိုင်သူများ
လူတိုင်းနီးပါးက ကိုယ်တကယ်ချစ်ခဲယင်မြတ်နိုးခဲ့ရသူတွေကို တော်ရုံနဲ့မမေ့နိုင်ကြပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ သင်ကတော့ အဲဒီထက်ကိုပိုပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး သူ့အကောင့်ထဲ၀င်ကြည့်လိုက် ၊ feel လိုက် ၊ငိုလိုက် ၊ပြီးရင် Status တွေ စောင်းမြောင်းတင်လိုက်နဲ့ပေါ့။ သူမတော်တဆ၀င်ကြည့်မိခဲ့ရင် တွေ့အောင်ဆိုပြီး ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ ပိုစ့်တွေတင်နေပေမယ့် ဟိုကတော့ ၀င်ကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေ တော်တော်ကိုနည်းတာမို့ သင်ပဲငပေါကြီးဖြစ်ပြီး Single ဘ၀မှာ ပတ်ချာလည်ကျန်နေခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဘက်လူကကိုယ့်ကို စာမပြန်တော့ရင်တောင် အကင်းမပါးဘဲ message တွေဆက်တိုက်ပို့နေဦးမယ့်လူစားမျိုးပါ။ တစ်ခါလောက်ချိန်းတွေ့ပြီးလို့ ကိုယ့်ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုသူ သဘောမကျလို့ဆိုတာကို တန်းသိသင့်ပြီး အဲဒီလိုမသိပဲ အားတဲ့ချိန်တိုင်းသူ့ရုံးရှေ့သွားစောင့် ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက သတိပေးရင်ရန်ပြန်တွေ့နဲ့ လုပ်နေရင်တော့ ပျော်ပျော်ကြီး FA ဘ၀မှာကျန်နေခဲ့ဖို့သာ ပြင်ဆင်ထားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေမှ မသိထားရင် ကိုယ်ပဲခံရမှာ
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ကိုယ့်ရည်းစားကို ကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီးကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းထဲမှတော့ သူတို့ကို ‌ဗီလိန်လို့ နာမည်လှလှလေးခေါ်ပေမယ့် အပြင်မှာတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ စနိုက်ကြော်မလို့ အခေါ်ခံရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီစနိုက်ကြော်မလေးတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့မှပဲ ခင်မင်မှူကိုမှအားမနာ တခြားယောက်ျားလေးတွေကိုမေ့ပြီး ကိုယ့်ရည်းစားမှကိုယ့်ရည်းစား အတင်းကာရောကြောင်တောင်နှိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတာဟာ ဇာတ်ကားတွေအကြည့်များလို့ပဲလား သူ့တို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇပဲလားဆိုတာတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်က သူတို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို လုံး၀မသိလိုက်ပဲ နောက်ကျမှ ခံလိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်အောင် သိသင့်တာလေးတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ချည်းကပ်ပုံချည်းကပ်နည်းလေးတချို့ကို လက်လှမ်းမီသလောက်စုစည်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တာကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ မွေးရာပါဆဌမအာရုံကို ဆက်ပြီးအသုံးချကြဖို့ပါပဲ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Social Media ဆိုတာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူကို အလွယ်ကူဆုံးချည်းကပ်နိုင်ပြီး အပြင်မှာရိုးသားဟန်ဆောင်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမီးရည်းစားတွေ Password အပြန်အလှန်ပေးထားရင်တော့ သူ့ကံပေါ့နော်။ ဒါတောင် ကာယကံရှင်က တခြားအကောင့်နဲ့သွားကြူနေရင်မပြောတတ်ဘူး။ ဥပမာ သင့်ချစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သင့်ချစ်သူရဲ့ Fri List ထဲမှာတွေ့ရပြီး Love react တွေနဲ့ မလွတ်မကင်း Comment တွေအမြဲပေးနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ နည်းနည်းသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါပြီ။
ပုံမှန်ဆုံလေ့မရှိပေမယ့် သင့်ချစ်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှ သင်နဲ့ခပ်စိပ်စိပ်ဆုံကြဖို့ပြောလာတာမျိုး ၊ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီး နင့်ဘဲရောမခေါ်ဘူးလား ဆိုတာမျိုး ၊ နှစ်ယောက်တည်းဆိုပျင်းစရာကြီး နင့်Boyfriend ပါခေါ်လိုက်လေဆိုတာမျိုးတွေပြောလာရင်တော့ တပ်အပ်ကြီးမစွပ်စွဲသင့်ပေမယ့် နည်းနည်းသတိထားဖို့တော့လိုပါပြီ။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Third Wheel အဖြစ်ခံပြီး သူများအတွဲကြားထဲ ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ လျှောက်မသွားချင်ပါဘူး။
တခြားအချိန်တွေမှာ ကပိုကရိုနဲ့ ပစ်စလက်ခတ်နေသလောက် သင့်ရည်းစားပါလာတော့မယ်ဆိုရင် တခါမှမလိမ်းဖူးတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ နှုတ်ခမ်းနီတွေသေချာလိမ်းထားပြီး အရမ်းတွေလှ‌ချင်နေတာမျိုး။ အရင်က တဗြဲဗြဲအော်ဟစ်ပြောဆိုရယ်မောတတ်ပေမယ့် သင့်ရည်းစားရှေ့မှာလေယူလေသိမ်းတွေကအစ ညင်သာပျော့ပြောင်းနေတာမျိုးဆိုရင် သိပ်မရိုးသားတော့ပါဘူး။
ညသန်းခေါင် ဒါမှမဟုတ် မနက်စောစောလိုအချိန်မျိုးမှာ စာတွေပုံမှန်ပို့ထားတာမျိုး ဖုန်းဆက်ထားတာမျိုးတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ အထူးသတိထားဖို့လိုပါပြီ။ ဘယ်မိန်းကလေးကမှ တခြားယောက်ျားလေးကို အချိန်မဟုတ်အခါမဟုတ်ကြီး Message မပို့ ဖုန်းမဆက်ပါဘူး။ ဒါဟာ သင်မရှိလောက်တဲ့အချိန်ကိုမှန်းပြီးတော့သော်လည်းကောင်း အခြားအကြံအစည်တစ်ခုခုနဲ့သော်လည်းကောင်း ဇာတ်လမ်းဆင်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး လိုတာထက်ပိုပြီး ခဏခဏ စာပို့တာ ဖုန်းဆက်တာမျိုးတွေလုပ်လာရင်လည်း အတူတူပါပဲ။
မသိမသာကော သိသိသာသာကော သင့်ရည်းစားကို ထိတာ ၊ စကားပြောရင်း လှမ်းရိုက်တာ ၊ လမ်းသွားရင်လက်မောင်းကိုလှမ်းချိတ်တာ (ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်ခင်တဲ့ပုံစံနဲ့) ၊ သင့်ချစ်သူပြောသမျှဟာသတွေကို မရယ်ရလည်း အသားကုန်အူတက်နေတာ (အိုဗာတင်းဖျော်တာ) ၊ သင်မမြင်ဘူးထင်ပြီး Eye Contact တွေလှမ်းလှမ်းလုပ်တာ၊ သင့်ချစ်သူရှေ့မှာ စကားတွေအရမ်းသွက်နေတာမျိုးတွေဆိုရင် သတိထားပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့ သင်အလုပ်မအားတဲ့အချိန်မျိုးကိုရွေးပြီး နှစ်ယောက်တည်းဆုံဖို့
မျက်နှာပြောင်တိုက် ကြိုးစားလာတာမျိုးပါ ။ဥပမာ- ငါ Shopping သွားချင်လို့ နင်မအားဘူးဆိုရင် နင့်ဘဲကို ခေါ်သွားလိုက်မယ်နော်ဆိုတာမျိုးပါပဲ။
Cheating ထက်ဆိုးရွားတဲ့ Relationship ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲ
စုံတွဲတိုင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ Relationship တွေကိုအဆင်ပြေဆုံးနဲ့ အခိုင်မြဲဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ချစ်သူရည်စားဘဝမှာ ရန်ဖြစ်ကြတာက Normal ပါပဲ။ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့လည်းစိတ်ကောက်လိုက် ပြန်ချော့လိုက်၊ ပြန်ချစ်သွားလိုက်နဲ့ပဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားကြတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာကပြဿနာလဲဆိုတော့ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်အပေါ်မှာ သာယာနေပြီ၊ ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါ ပြဿနာအကြီးကြီးရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစုက ယောင်္ကျားလေးတွေဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင် တစ်ချို့က ဖြတ်လိုက်ကြတယ်၊ တစ်ချို့ကြတော့လည်း ဖောက်ပြန်နေတာကိုသိရက်နဲ့ မခွဲနိုင်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆက်တွဲတယ်။ တစ်ချို့ဆို Cheated အလုပ်ခံရတာကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရသွားပြီး မစားနိုင်မသောက်နိုင်နဲ့ Depression ဝင်တဲ့အထိပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Cheating လုပ်တယ်ဆိုတာ ဖောက်ပြန်တဲ့လူရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတာပဲဖြစ်ပြီး သင့်ဘက်က ချို့ယွင်းချက်ကြောင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ချို့ကတော့ ပြောကြပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားတွေကြားမှာ ဖောက်ပြန်တာက အဆိုးဆုံးလို့ပြောကြတယ်။ Cheating လုပ်တာဆိုးရွားတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင် Society မှာ Life မှာ မပြတ်ပဲ အတူတူရှိနေပြီး အဲ့ထက်ဆိုးရွားတဲ့ Relationship ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စုံတွဲတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ Issue တွေကတော့ Cheating ထက်ဆိုးရွားတဲ့ RS ပြဿနာတွေလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
အရာအားလုံးကို Control လုပ်တာ
တခါတလေ ကိုယ့်ဘာကိုယ်နေရင်တောင်အကောင်းလို့ တွေးမိလောက်တဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့ အတွဲတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့အမျိုးသားတွေက အချစ်ကို သူတို့ အတ္တနဲ့ရောထွေးတတ်ကြတယ်။ စိတ်ပူလို့၊ စိတ်မချလို့ ဆိုတဲ့ စကားအနောက်မှာကိုယ့် Partner ရဲ့ Life ကိုပါစိုးမိုးချယ်လှယ်ချင်ကြတယ်။ အဲ့တော့ မိန်းကလေးဘက်ကကြည့်ရင်လည်း သူလုပ်သမျှအရာတိုင်းကို ဟိုဟာမလုပ်နဲ့၊ ဒီဟာမလုပ်နဲ့၊ ဘယ်မသွားနဲ့ ညာမသွားနဲ့တွေလုပ်လာတဲ့အခါ ကြာလာတော့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်လာတယ်။ စိတ်ဆင်းရဲလာတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်မပိုင်တော့သလိုဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ့်နေချင်သလိုမနေရတဲ့ Life မှာ ရှိနေတဲ့ Relationship ကိုလည်းပျော်ရွှင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Manipulation (သို့) အနိုင်ကျင့်ခြင်း
ဒီ ပြဿနာကလည်း တချို့ Relationship တွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်တာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်တာဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ Domestic Voilence တွေ၊ Conversational Bullying တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြတ်လည်းမပြတ်ပဲ အနိုင်ကျင့်ခံရတာများတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာအမြဲ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေရလေ့ရှိတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုရင်လည်း သူတို့ကို Insecure ဖြစ်အောင်၊ စကားလုံးတွေ၊ အပြစ်တင်ရှုံ့ချတာတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Not Enough ဖြစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ခံစားသွားစေအောင် ဆက်ဆံလေ့ရှိတယ်။ ဒီလို Relationship တွေကတော့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ Quit လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ Manipulate အလုပ်ခံနေရတဲ့ Relationship မှာဆက်နေစရာ အကြောင်းလုံးဝမရှိလို့ပါ။
Partner ရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ပိတ်ပင်ခြင်း
ယောင်္ကျားလေးတိုင်းကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးရဲ့ Nature မှာကိုယ့်ကိုယ်ကို Superior အဖြစ်နေချင်တဲ့၊ ကိုယ်ကသာအားကိုးခံချင်တဲ့ သဘာဝရှိတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးက ကိုယ့်ထက်တော်ရင်၊ထက်ရင်၊ ဝင်ငွေကောင်းရင်၊ ပိုလူဝင်ဆံ့ရင် မကြိုက်ကြဘူး။ မနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း Self-Confident မရှိယောင်္ကျားလေးတွေမှာပဲတွေ့ရတာပါ။ အဲ့လို Inferior ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေက ကိုယ့် Partner တိုးတက်မယ့်အရာတွေ၊ သင်ယူလေ့လာဖို့ အခွင့်အရေးသစ်တွေ ကိုအမြဲပိတ်ပင်လေ့ရှိတယ်။ စိတ်ပူလို့ပါဆိုပြီး ဖိနှိပ်ထားတယ်။ တကယ် Right Person ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်၊ တိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက် အမြဲ Support လုပ်ပေး၊ အားပေးအားမြှောက်နဲ့ ကြိုးစားခိုင်းတဲ့သူတွေပါ။
ဒါကလည်းအရမ်းတွေ့ရများတဲ့ Issue တစ်ခုပါ။ စကြိုက်တည်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ၊ အကုန်အကုန်ပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်တွေနဲ့ Dark Side တွေကိုပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ဟထားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့စစလိုက်ချင်းတုန်းကတော့ ကိုယ့်ကိုပြန်ကြိုက်စေချင်ဇောနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နဂိုပြုမူနေထိုင်ပုံတွေမဟုတ်ပဲ တစ်ဖက်လူကြိုက်မယ့်ပုံစံတွေ ဟန်ဆောင်တတ်ကြတယ်။ ဒါတွေကတစ်သက်လုံးပြောင်းလဲပြီးလုပ်သွားနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလုပ်နိုင်ရင် တွဲလာလို့ အချိန်ကြာပြီးမှ သရုပ်မှန်တွေပေါ်လာတဲ့အခါ စိတ်သဘောထားတွေမတိုက်ဆိုင်ပဲ ပြဿနာတွေတက်တတ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပဋ္ဋိပက္ခအခြေအတင်တွေဖြစ်ပြီး မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တဲ့အထိတွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ချို့စုံတွဲတွေကျတော့ ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတဲ့ အခါ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် Affection မရှိတော့တာကို ဆိုလိုတာပါ။ တွဲသာတွဲနေရပေမယ့် ဒီ Relationship ကပျော်စရာလည်းမကောင်းတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်တွဲလက်စနဲ့ ဆက်တွဲနေတယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ ဥပမာပြောရရင် အဆိုတော် မေ ရဲ့ “Lost” သီချင်းထဲကလိုပဲ။ “ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး၊ ဘာမှလည်းမသိတော့ဘူး” ဆိုသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ရင်ခုန်စရာတွေ၊ တီတီတာတာ တွေမရှိတော့ဘူး။ စိတ်ပါလက်ပါလည်း မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပြန်လည်စိုပြေဖို့ အဖြေရှာသင့်ပါပြီ။
ပန်းစည်းထက်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ ကောင်မလေးကို အရည်ပျော်သွားစေနိုင်တဲ့ ချော့နည်းတွေကဘာတွေလဲ
ဈေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်တွေပေးမှ မဟုတ်ဘူးနော် (ချွင်းချက် - Gold-Digger တွေမပါ)
မိန်းကလေးဆိုတဲ့ သဘာဝကတော့ အနည်းနဲ့အများ အချော့ကြိုက်ကြတာချည်းပဲ။ ကိစ္စကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ရင်တောင် ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးဆီက ချော့တာ ကြင်နာတာကို လိုချင်တာမို့ စိတ်ကောက်တတ်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ ကောင်လေးဘက်ကလည်း အဲ့ဒါကို သဘောမပေါက်ပဲ ပစ်မထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲ့လိုတွေ လစ်လျူရှုပါများရင် ကောင်မလေးဘက်က ခံစားချက်တွေမျိုသိပ်ရပေါင်းများပြီး စိတ်ကုန်သွားစေနိုင်လို့ပါ။ အဲ့တော့ အတ္တတွေမာနတွေမထားပဲ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ စပြီးအလျော့ပေးလိုက်ပါ။
မိန်းကလေးတွေစိတ်ကလည်း ခန့်မှန်းရတော့ခက်တယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေးကိုချော့တဲ့နေရာမှာလည်းသူ့အကြိုက်တွေကို အလိုက်သိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးအများစုက သူတို့ချစ်သူကိုချော့တဲ့အခါတွေမှာ၊ အမှတ်လိုချင်တဲ့အခါတွေမှာ ပန်းစည်းလေးတွေ၊ Fancy Gift လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို Present လေးတွေပေးတာကို ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရှိသလို ဒီထက်ပိုပြီး ကြွေကျသွားစေနိုင်တဲ့ ချော့နည်းလေးတွေ၊ ပန်းစည်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ ဂရုစိုက်နည်းလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ “Little things matter”ဆိုတဲ့အတိုင်း သေးသေးဖွဲဖွဲအပြုအမူလေးတွေက အချစ်တွေတိုးပြီး သင်တို့ရဲ့ Relationship ကိုပိုပြီး ခိုင်မြဲစေမှာပါ။
သူကို အသိမပေးပဲ ရုံးသွားကြိုပါ
ကောင်မလေးက စိတ်ကောက်ပြီးဖုန်းမကိုင်တော့တဲ့အခါ၊ ဖုန်းတွေခေါင်းမာပြီး ဆက်နေမယ့်အစား သူ့စိတ် Calm ဖြစ်ဖို့ Space ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် သူမကိုအသိမပေးပဲ ရုံးအပြန်(သို့) ကျောင်းအပြန်းကိုသွားကြိုလိုက်ပါ။ အဲ့လိုသွားကြိုတာကသူတို့ကို Feel Special ဖြစ်စေပြီး Safe ဖြစ်တယ်လို့လည်းခံစားရစေပါတယ်။ သွားကြိုတဲ့အခါ သူကြိုက်တဲ့ Cake လေး၊ Bubble Tea လေးဝယ်သွားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။
အမှတ်တရလေးတွေကို အမြဲ သတိတရရှိပါစေ
ဒီအချက်ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ Anniversary မေ့နေတာတို့၊ သူ့မွေးနေ့ကိုမေ့နေတာတို့ဆိုရင် ရှော့ အကြီးကြီးရှိတယ်နော်။ ကိုယ်ကအလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်နေလို့၊ အာရုံနောက်နေလို့ အဲ့လို Special Day လေးတွေကို ခဏမေ့သွားမိတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကဘာအကြောင်းကြောင့်ရယ်မှမဟုတ်ပေမယ့် ကောင်မလေးဘက်ကကျ သူ့ကိုမချစ်တော့တာလား၊ စိတ်ပါဝင်စားမရှိတော့ဘူးလား၊ အသစ်တွေ့နေလို့လားစတဲ့ Psycho လေးတွေတွေးတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Special Day လေးတွေကိုသေချာမှတ်ထားပြီး သူ့ထက်အရင်ဦးအောင် Surprise လုပ်ပေးပါ။ Surprise လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတကူးတကကြီး လက်ဆောင်တွေနဲ့ချည်းလုပ်တာမပြောပဲ ဖုန်းလေးဆက်တာတို့၊ နှစ်ယောက်သား Couple ပုံလေးတင်ပြီး Celebrate လုပ်တာတို့က ချစ်သူကိုလည်း ကြည်နူးစေပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ ပန်းစည်းကြီးပဲပေးနေတာကအရမ်း Old School ဆန်ပြီးမထိရောက်ဘူးနော်။ အခုနောက်ပိုင်းကောင်မလေးတွေတော်တော်များများက အစားတစ်လိုင်း Foodie လေးတွေများတယ်။ အဲ့တော့ သူကြိုက်တဲ့ မုန့်လေးတွေပို့ပေးတာတို့၊ သူစားချင်တာ Craving ဖြစ်နေတာလေးတွေကို လိုက်ကျွေးတာက သင့်ကိုအရမ်း Appreciate ဖြစ်သွားမယ့်အပြင် အဲ့လိုအတူတူနှစ်ယောက်ထွက်စားရင် ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ရင်းနှီးစေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကိုယ်တိုင်ကအစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရတာဝါသနာပါရင် သူစားဖို့ ချက်ပြုတ်ပေးပါ။ စားလို့ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ ကောင်မလေးတွေက သူတို့အတွက်ချစ်သူက ဂရုတစိုက်ချက်ပြုတ်ပေးတာဆိုရင်အရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။
သူကြိုက်တဲ့ အရာလေးတွေနဲ့ Surprise လုပ်ပါ
ဒါလည်း Flower Bouquet ထက်ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲကနောက်ထပ် Option တစ်ခုပါ။ ဒီအချက်ကတော့ သင့်ရဲ့လေ့လာမှု၊ အလိုက်သိမှုအပေါ်အများကြီးမူတည်သွားပြီ။ ဘာလိုလည်းဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေရဲ့အကြိုက်တွေ၊သူတို့ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီကြလို့ပါ။ တကယ်လို့ကောင်မလေးက EDM Music ကြိုက်တယ်ဆို သူနဲ့အတူတူ EDM Show သွားတာတို့၊ Gamer ကောင်မလေးဆိုရင် သူကို Gaming Chair လေးလက်ဆောင်ပေးတာတို့၊ ချစ်သူက Sporty Girl လေးဆိုရင်သူဝတ်လေ့ဝတ်ထရှိတဲ့ Track Suits လေးတွေ၊ Cap လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာတို့ပေါ့။ Fancy ဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဆိုတာထက်ချစ်သူအတွက် Daily Life မှာနေ့စဉ်အသုံးဝင်စေမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကပိုကောင်းပါတယ်။
သတိရကြောင်း Message လေးတွေပို့ပါ
Small things matter the most ဆိုတဲ့အတိုင်း သေးသေးဖွဲဖွဲဂရုစိုက်မှုလေးတွေ၊ အလေးပေးမှုလေးတွေက သင့်ရဲ့ Love Life ကိုပိုပြီးစိုပြေစေပါတယ်။ အဲ့လိုပြောလို့နေ့တိုင်း အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်းကြီးတွေကို ကဗျာဆန်ဆန်ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုံးမှာ၊ အပြင်သွားခါနီး၊ ပြန်ရောက်တဲ့အခါ၊ အိပ်ခါနီးတို့မှာ နေကောင်းရဲ့လား၊ ဂရုစိုက်နော်၊ ချစ်တယ်၊ သတိရတယ်၊ တစ်နေ့တာအဆင်ပြေရဲ့လား၊ စောစောအိပ်နော် စတဲ့ Short Message လေးတွေက ပို့တဲ့သူကိုလည်းကြည်နူးစေသလို လက်ခံရရှိတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်း နွေးထွေးစေပါတယ်။ သူတို့အတွက် အမြဲသတိတရရှိတယ်အချစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ Feeling ကိုလည်းပေးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်ရှုပ်ကောင်မလေးကို သတိတရစာလေးတွေပို့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဒါကတော့ ဒီ Topic တစ်ခုလုံးရဲ့ မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအရာ ပါ။ အပေါ်ကအချက်တွေ ဘယ်လောက်လိုက်နာလိုက်နာ ကိုယ်တိုင်ကကျ အပြောလေးတွေပဲကောင်းပြီး ချစ်သူအပေါ်မှာသစ္စာမရှိရင်အကုန်အချည်းနှီးပါပဲ။ Couple တွေတော်တော်များများမှာက အချိန်ကာလတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါ ငြီးငွှေ့လာတတ်တယ်။ အဲ့တော့အသစ်အဆန်းအလှအပတွေမှာသာယာလာတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြန်စဉ်းစားပါ။ လှတာတစ်ခုအတွက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ်တစ်ဘဝလုံးစာကောင်းမယ့်သူကို စွန့်လွှတ်ဖို့တန်ရဲ့လား။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်အောင်နေပါ။ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ ချစ်သူအပေါ်သစ္စာရှိပါ။ သူပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့နားထောင်ပေးပါ။ ဒီလိုဆို အားလုံးလိုချင်နေကြတဲ့ Perfect ဖြစ်တဲ့ Relationship ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာအသေချာပဲပေါ့။
#Gift better than Flower
အချစ်ရေးကံကောင်းဖို့ဆိုတာကလည်း တကယ်တော့ ဘုရားပေးတဲ့ဆုလို့ပြောရမလို တော်တော်လေးကို ကံထူးမှ ရရှိပိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့ ဆုလာဘ်တစ်မျိုးပါ။ တချို့ကတော့ ဘယ်လောက်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါစေ ကံတရားရဲ့စီမံမှူကြားမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာခဲ့ရတာမျိုး တွေရှိသလို ရတာမလို လိုတာမရခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်း အများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ တခြားသောအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကံဆိုးတာ ၊ချစ်ခရီးလမ်းမဖြောင့်ဖြူးတာတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီရာသီခွင် (၄) ခု ကတော့ နက္ခတ်ကြယ်တာရာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှူအရကိုက အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းတတ်ကြတဲ့သူလေးတွေလို ဆိုထားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာအပေါ်ကို နက္ခတ်တွေရဲ့ သက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှူက အရမ်းအရေးပါတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲတဲ့လောကကြီးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အရာတွေကို ရရှိထားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာဇာတ်ပေါင်းခန်းလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းခြွေရင်း ဘယ်ရာသီခွင်လေးတွေကများ ထူးထူးခြားခြား အချစ်ရေးကံဆိုးတတ်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ Taurus လေးတွေဟာ အချစ်ကံခေတတ်လေ့ရှိတဲ့ ရာသီခွင်ထဲမှာထိပ်ဆုံးကပါ၀င်နေပါတယ်။ relationship တစ်ခုကို တည်မြဲအောင် အချိန်အကြာကြီးကြိုးစား တည်ဆောက်လာခဲ့ရင်တောင်မှ တခြားသူတွေလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သံသယ၀င်တာ၊ အငြင်းပွားတာမျိုးတွေအပြင် အမြင်မတူ၊ ခံယူချက်မတူတာမျိုးတွေနဲ့ တစ်ချိန်လုံးနီးပါး အဆင်မပြေဖြစ်နေနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ၀မ်းနည်းစရာ ending‌ လေးတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ရလေ့ရှိပါတယ်။
Libra လေးတွေကလည်း အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကံဆိုးတတ်တဲ့ရာသီခွင်‌ပိုင်‌ရှင်လေးတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ကတော့ ကံတရားနဲ့ရာသီခွင်တွေရဲ့စိုးမိုးမှူကြောင့်ချည်း ချစ်ကံခေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပင်ကိုယ်အမူအကျင့်လေးတွေကြောင့်လည်း ချစ်ကံခေနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရတာမလို လိုတာမရဆိုသလို အချစ်ရေးမှာ ရွေးချယ်လွန်းတာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ငှက်ပျောတုံးဖက်ပြီးကျန်ခဲ့ရမယ့် အပျိုကြီး ၊လူပျိုကြီးဇာတာပိုင်ရှင်လေးတွေလို့တောင် ဆိုရမယ့်သဘောပါ။
Capricorn လေးတွေလည်း အများအားဖြင့် ချစ်ကံခေတတ်တဲ့ ရာသီခွင်တွေထဲမှာပါ၀င်ပါတယ် ။တချို့ Capricorn လေးတွေကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က အချစ်စစ်ဆိုတာကြီးကို မရှာဖွေချင်ကြတာပါတဲ့။ အုံပုန်းသမားလေးတွေ ၊တောထွက်တရားကျင့်မယ့်သူလေးတွေလို့ ဆိုရမလားပါပဲ။ အချစ်စစ်နဲ့ဆုံတွေနိုင်ဖို့အတွက် Capricorn လေးတွေအနေနဲ့ အခုထက်ပိုပြီး ပွင့်လင်းမှူရှိဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှူအပြည့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ သတိပေးပါရစေ။
Pisces လေးတွေကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် တော်ရုံကံကောင်းလေ့မရှိကြပေမဲ့ အဆိုးထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမလားပါပဲ။ သူတို့အနေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို အပျက်မခံပဲ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးမှာ ပျော်ရွှင်စွာလက်တွဲကြလေသတည်းဆိုတဲ့ ဇာတ်သိမ်းကောင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဘာသွေးပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးသားအဆင်ပြေဖို့က အဓိကကျပါတယ်
ခုမှစပြီးအပြင်မှာဆုံတွေ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူဆီကနေ ဘာသွေးအမျိုးအစားလဲလို့အမေးခံရလို့ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးကြုံဖူးကြလား? အရမ်းစိတ်မရှူပ်သွားပါနဲ့ ။ ဒီမေးခွန်းက အာရှစုံတွဲတွေရဲ့ First Date မှာ အရမ်းကိုခေတ်စားလာတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်လို ပြသနာတိုင်း ကိစ္စရပ်တိုင်းကို အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်‌ဆန် ဖြေရှင်းနိုင်နေပြီး အချိန်ကိုတန်ဖိုးအရမ်းထားတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်သူကမှ ကိစ္စတစ်ခု၊မေးခွန်းတစ်ခုအပေါ်အချိန်အကြာကြီးယူပြီး အဖြေမထုတ်ချင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် အာရှတချို့နိုင်ငံတွေမှာ သွေးအမျိုးအစားဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းပင်ကိုယ်စရိုက်ကို အများကြီးထင်ဟပ်နေတယ်လို့ လက်ခံယူဆထားကြပြီး သူကကိုယ်နဲ့ရေရှည်အဆင်ပြေနိုင်မပြေနိုင်ကို သွေးအမျိုးအစားနဲ့ပဲ ယေဘုယျအားဖြင့် ခန့်မှန်းလာကြပါတယ်။သိပ္ပံသဘောတရားအရ တိကျတဲ့အဖြေတွေနဲ့လက်ခံထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် အာရှနိုင်ငံအတော်များများကတော့ ဗေဒင်တွေနက္ခတ်တွေကိုယုံကြည်ကြသလိုပဲ သွေးအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ယုံကြည်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံထားကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မတူကွဲပြားတဲ့အမူအကျင့်နဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေရှိကြတာကြောင့် ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲ ခုမှစတွေ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ရေရှည်မှာ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မလား ကိုယ်နဲ့လက်တွဲဖို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းရွေးချယ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
A သွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတယ်၊ရိုးသားတယ်၊တည်ငြိမ်အေးဆေးတယ်၊ဖန်တီးမှူအားကောင်းတယ်၊လက်တွေ့ဆန်ပြီး ခေါင်းရှူပ်မခံနိုင်တဲ့သဘောသဘာ၀မျိုးရှိတဲ့သူမျိုးတွေပါ။ ဒီအချက်တွေအရ သူတို့ဟာ ရုတ်တရက် ဖြစ်တည်လာတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုလွယ်လင့်တကူချစ်မယ့်လူစားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးဘ၀လက်တွဲဖော်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး သူတို့ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ပေါ်ကို ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းသလို သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းတော်ရုံထုတ်မပြတတ်ကြပါဘူး။ပြောရရင် မြင်မြင်ချင်းအချစ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ဘယ်တော့မှချစ်မှာမဟုတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ကိုတော်ရုံချစ်ဖို့ခဲယဉ်းသလို သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့သံယောဇဉ်တွယ်တတ်ကြတဲ့သူတွေမို့ ခံစားရမှာကို ‌စိုးရိမ်တတ်ကြတာကြောင့်ပါပဲ။
Aသွေးရဲ့အသင့်တော်ဆုံးလက်တွဲဖော်ကတော့ O သွေးပါ။ အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ခံစားမှူကိုပေးနိုင်တဲ့သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင် တွေဖြစ်တာကြောင့် A သွေးအတွက်တော့ အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။
မတွဲဘက်သင့်တဲ့ သွေးအမျိုးအစားကတော့ B သွေးပါ။ B သွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး ပတ်၀န်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ Lifestyle ကိုနှစ်သက်ကြတာကြောင့် A သွေးအတွက်တော့ ဆန့်ကျင်ဘက် အမူအကျင့်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ပါတယ်။
B သွေးကတော့ A သွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့လုံး၀ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်၊ လူမှူကျင့်၀တ်တွေနဲ့ တင်းကြပ်ချုပ်နှောင်မှူတွေကိုမုန်းတယ်။ တခါတရံမှာ တာ၀န်ကြီးတစ်ခုယူထားရသလိုခံစားချက်မျိုးကိုမနှစ်သက်သလို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ်လေးအနည်းအကျဉ်းရှိတတ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ သူတို့ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စွန့်စားမှူဆန်ဆန်အချစ်မျိုးကိုပိုသဘောကျတတ်ပြီး ရိုးရှင်းတည်ငြိမ်ပြီးပျင်းစရာကောင်းတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးကိုရင်မခုန်တတ်ကြပါဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ social ကျကျနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေတတ်ပြီး ရည်းစားများတတ်တဲ့ သဘောသဘာ၀ရှိတာမို့ long term relationship ကို တော်တန်ရုံ သဘောမကျတတ်တဲ့ သွေးအမျိုးအစားပိုင်ရှင်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အသင့်တော်ဆုံးလက်တွဲဖော်ကတော့ O သွေးနဲ့ AB သွေးပိုင်ရှင်တွေပါ။ O သွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ လူတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်လွယ်သလို လိုက်လျောညီထွေနေတတ်တာကြောင့် B သွေးနဲ့အရမ်းကိုပနံသင့်နိုင်တဲ့သွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး AB သွေးသမားတွေကတော့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တွေးခေါ်တတ်သူမျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့် B သွေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ အဆင်မပြေနိုင်ဆုံးလက်တွဲဖော်ကတော့ A သွေးပါ။ B သွေးရဲ့ လွတ်လပ်မှူကိုမြတ်နိုးတဲ့အမူအကျင့်ကို A သွေးကဘယ်လိုမှသဘောကျလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ A သွေးဘက်က ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း B သွေးဘက်ကရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ နှစ်ဦးစလုံးက မတူညီတဲ့လားရာနှစ်ခုကိုပဲအမြဲ သွားနေကြမှာပါပဲ။
AB သွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ လိုက်လျောညီထွေမှူနဲ့ မပြတ်သားမှူတွေကြားမှာရှိနေတဲ့ အတွေးအခေါ်သမားတွေလို့ဆိုရမှာပါ။ ငွေကြေးပေါ်မှာရော ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်မှာပါ လောဘအနည်းဆုံးသူမျိုးတွေပါပဲ။ နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့က အရာရာတိုင်းပေါ်မှာ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် တွေးခေါ်တတ်ကြပါတယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့ စပြီးဆုံတွေ့ပြီဆိုရင် တစ်ဘက်လူရဲ့အမူအကျင့်အတိုင်းအလိုက်သင့်နေဖို့ မခဲယဉ်းတဲ့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေဖို့လွယ်ကူပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အလွယ်တကူမချနိုင်တဲ့၊ မပြတ်သားတဲ့သဘာ၀ကြောင့်ပဲ အဲဒီလူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူအဖြစ် relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရာ ခဲယဉ်းသွားစေပြန်ပါတယ်။
AB သွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့အသင့်တော်ဆုံးကတော့ AB သွေးပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ AB သွေးသမားတွေဟာ လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်တယ်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတယ် ၊သူတို့ရဲ့ သဘောထားပြည့်၀မှူနဲ့ တစ်ဘက်သားအပေါ်နားလည်မှူတွေကြောင့် သွေးအမျိုးအစားတူအချင်းချင်းဆို အတိုင်းထက်လွန်တည်မြဲတဲ့ relationship ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာအသေ‌အချာပါပဲ။
AB သမားတွေဟာ B သွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ချစ်သူအနေနဲ့တော့အရမ်းအဆင်မပြေလှပါဘူး။ O သွေးရဲ့စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိမှူနဲ့ AB သွေးရဲ့ Calm ဖြစ်မှူဟာ ရေရှည်မှာ ပြသနာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ပါ။
O သွေးတွေကတော့ ခင်မင်တတ်ပြီး ပေါင်းလို့ကောင်းတဲ့လူစားမျိုးတွေပါ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရုံတင်မက အရမ်းရက်ရောတတ်သလို ဇွဲလည်းရှိကြပါတယ်။အနာဂါတ်အပေါ်အရမ်းယုံကြည်မှူပြည့်၀လွန်းတာကြောင့် တခါတရံမှာ အလှမ်းကျယ် အလယ်လပ်တာမျိုးဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအချက်ကပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ တချို့အရာတွေကိုထပ်မံဖန်တီးဖို့ အကြောင်းဖန်လာနိုင်ပါသေးတယ် ။ Relationship အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ ချစ်သူအပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ရှက်ရွံ့တတ်ကြသူတွေမဟုတ်သလို ခဏခဏလည်း နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖော်ပြတတ်ကြတဲ့သူမျိုးတွေပါပဲ။
O သွေးတွေရဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေတတ်တဲ့သဘောသဘာ၀‌အရ အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် အလိုက်ဖက်ဆုံးသွေးအမျိုးအစားကတော့ A သွေးပါ။ အကြောင်းကတော့ A သွေးသမားတွေကိုယ်တိုင်က ကိစ္စတစ်ရပ်အပေါ်မှာပင်ကိုယ်အားစိုက်ထုတ်မှူရှိသလို O သွေးရဲ့ Relationship နဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးဆောင်မှူအပေါ်မှာလည်း သဘောကျလက်ခံပေးတတ်ကြတဲ့သူတွေမို့ပါ။ A သွေးသမားတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို အကောင်းဆုံးဝေမျှပေးနိုင်တာ O သွေးပိုင်ရှင်တွေပါပဲ။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမှူကြောင့် O သွေးသမားတွေနဲ့မတည့်တဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ ဘယ်သွေးအမျိုးအစားနဲ့မဆို အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ထူးထူးခြားခြား Blood Type သမားတွေပါပဲ။
Stay At Home ကာလ ကတောက်ကဆများတဲ့ LDRS လေးစိုပြေစေဖို့ သတိထားရမယ့်အချက် (၄) ချက်
အသေးအမွှားလေးတွေကြောင့် အကြီးအကြယ်ရန်ဖြစ်ရတာ ခဏခဏဆိုသလို
ဝေးနေကြတဲ့ချစ်သူတွေအကြောင်းကို စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အခက်အခဲလေးတွေ၊ အဆင်မပြေတာလေးတွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ Covid ဖြစ်လို့ Stay At Home လုပ်ရတဲ့ဒီအချိန်က ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် နီးရက်နဲ့ ဝေးနေရတဲ့ LDRS တွေဖြစ်လာပါတယ်။
တချိူ့ပြဿနာတွေက Message လေးတစ်စောင်နဲ့ ကြီးထွားသွားတတ်သလို အပြင်မှာတွေ့လိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းပြေလည်သွားတတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အပြင်ထွက်တွေ့လို့မရတဲ့အချိန်မို့ စကားများ၊ရန်ဖြစ်ရတာက ဒီကာလမှာ ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရရင် သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သမီးရည်းစားတွေပါ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပါ။ စာမပို့လို့၊ Reply ပြန်တာ နောက်ကျလို့ စတဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကြောင့် အကြီးအကြယ်ရန်ဖြစ်ရတာ ခဏခဏဆိုသလိုပေါ့။ ဒီပြဿနာကို ပိုပြီးအဆင်ပြေချော့မွေ့သွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲဖြေရှင်းရတာမဟုတ်လို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လေးစားမှုတွေရှိရင် အမြန်ဆုံးပြေလည်သွားကြမှာပါ။
နည်းနည်းပဲပြောပါဆိုတာက စကားမပြောပဲ အဆက်အသွယ်မလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ မရပ်မနား စာပို့နေတာက တစ်ဖက်ကလူကို စိတ်ရှုပ်စေတာပဲ အဖတ်တင်မှာပါ။ ပြီးတော့ စာတစ်ကြောင်းက အဓိပ္ပာယ်အမျိူးမျိူးသက်ရောက်ပြီး Direction လွဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအစား အချိန်လေးတစ်ခုသတ်မှတ်ကြည့်ပါ။ တစ်ရက်လုံးစာ အဖြစ်အပျက်တွေကို ညနေဘက် နှစ်ယောက်လုံးနားမှ ပြန်ပြောကြတာမျိူးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ လိုအပ်နေတဲ့အချိန် ရှိနေနိုင်တာက ပိုမကောင်းဘူးလား။
စိတ်ထဲက မပါတဲ့ စကားတွေ
ဒီတိုင်းနေနေတာကအကောင်း..ရင့်ရင့်သီးသီးတွေ ပြောပြီး ရန်ဖြစ်၊ Unfriend တွေလုပ်၊ သုံးလေးရက်လောက် အဆက်အသွယ်မလုပ်ကြတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် မတန်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Social Media နဲ့သာ ဆက်သွယ်နေရတဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် စကားကို ညိုညိုနှိုင်းနှိုင်းပြောပါ။ စကားများခဲ့သည့်တိုင် စိတ်ထဲမပါတဲ့ ရင့်ရင့်သီးသီးစကားလုံးတွေနဲ့ တစ်ဖက်လူကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ ဝေးနေတဲ့အချိန် ခံစားချက်တွေပါ ပိုမဝေးသွားချင်ပါနဲ့။
Video Call ကို အသုံးချပါ။
ရုတ်တရက် Stay At Home တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ မတွေ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ အတွဲတွေအဖို့ ပိုပြီး လွမ်းနေရမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ နည်းပညာကို အသုံးချပါ။ အားအားနေ စာနဲ့ရိုက်ပြီး ပြောတာထက် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး စကားပြောရတာက ကြည်နူးစရာကောင်းမှာပါ။ အခြားအနှောင့်အယှက်တွေမရှိပဲ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောလို့ရမယ့် အချိန်ကို ရွေးပါ။ မတွေ့ရတာထက်စာရင် မျက်နှာလေးမြင်နေရတာက နီးကပ်မှုကို ဖြစ်စေမှာပါ။
အချိန်ကို သူ့နေရာနဲ့ သူထားဖို့လိုပါမယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန် အလုပ်ကို အာရုံစိုက်ထားသင့်သလို ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာလည်း ကိုယ့်ဝါသနာပါတာ၊ ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ အချိန်ကုန်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လောက် Multi Tasking ပိုင်တယ်ပဲပြောပြော အာရုံထွေပြားတာ၊ အပြည့်အ၀ အချိန်မပေးနိုင်တာဖြစ်တတ်လို့ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ဆိုလည်း စကားများရတာပဲ အဖတ်တင်မှာပါ။ ကိုယ်ချစ်သူအတွက် ဖယ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်လည်း ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အ၀ သူ့အတွက်သာဖြစ်စေပါ။
#Long Distance Relationship During Covid